Free Thinker: ကြောင်ကို ဘယ်သူချူဆွဲပေးမလဲ
ယခုတလော ကျွန်တော်တို့မြန်မာများအကြား အရေးတကြီး ဆွေးနွေးစရာ ဖြစ်နေသည့် ဧရာဝတီအရေးတွင် ကျွန်တော် နစ်မျောနေလိုက်သည်မှာ တစ်ပတ်မကတော့ပါ။ ဧရာဝတီနှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းများစု၊ ဧရာဝတီအကြောင်း ရေးထားသည့် အချက်အလက်များရှာ။ မြစ်ဆုံဆည်အကြောင်းလေ့လာ။ ဗီဒီယိုဖိုင်၊ အသံဖိုင်များ download လုပ် နှင့် တခြား ဘာမှမလုပ်ဖြစ်ပါ။ ကျွန်တော်သည်လည်း အခြားမြန်မာနိုင်ငံသားများနည်းတူ ဧရာဝတီကိစ္စကို သေရေးရှင်ရေးသဖွယ် ခံစားမိပါသည်။ ဧရာတီအကြောင်း ရေးကြ၊ ပြောကြ၊ လှုပ်ရှားကြ၊ တိုင်ပင်ကြ၊ အစိုးရကို ဖိအားပေးကြ လုပ်နေသူများ အားလည်း အထူးကျေးဇူးတင်မိပါ၏။ သူတို့ကြောင့်ပင် အစိုးရဆိုသူများကလည်း သူတို့ မဟားတရားခြေလွန်လက်လွန် လုပ်ထားသည်များကို ပြန်လည် စဉ်းစားပါမည် ဆိုသည်မဟုတ်ပါလော။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပညာရှင် ဦးမြင့်ဇော်ပြောသွားသည်မှာ အလွန်ကောင်းပါသည်။ သည်ကဲ့သို့သော ပညာရှင်များထံမှ အကြံဉာဏ်များယူရန် မသင့်ပါသလော။ အောက်ပါ လင့်ခ်တွင် download လုပ်ကာ နားဆင်ပါ။
ဧရာဝတီအကြောင်း ရေးကြ၊ သားကြ၊ ပြောဆိုဆွေးနွေးကြသည်မှာ အတော်များနေပြီဖြစ်ပါသဖြင့် ကျွန်တော် သည်နေရာတွင် အထွေအထူး ထပ်မံမရေးတော့ပါ။ သို့သော် ဖတ်လိုသူများအတွက် link လေးများ ပေးလိုက်ပါသည်။
ဧရာဝတီ ကို ကာကွယ်ကြစို့ (အောင်ဒင်)
မြစ်ဆုံဆည် နောက်ဆက်တွဲရေးသားသူ- ကိုတင့် (ဘူမိအင်ဂျင်နီယာ)
မြစ်ဆုံဆည် စီမံကိန်းမှ ကြားပွဲစားများအကြောင်းတစေ့တစောင်း...
နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး၏ ထောက်ခံမှုပါရှိသော ဝန်ကြီး ဦးစိုးသိန်း၏ ကြေညာချက် အပြည့်အစုံ
ပင်လုံ စာချုပ်အတွက် ဦးဆောင်ခဲ့သူကချင်ခေါင်းဆောင် Howa Duwa M.Hkun Hpung ၏ သား၊ ကချင်ခေါင်းဆောင် ဟိုဝါးဒူဝါဇော်ဂမ်နှင့် ဆရာဦးမြင့်တို့ တွေ့ဆုံစဉ်က မြစ်ဆုံရေကာတာ စီမံကိန်း နှင့် ပတ်သက်၍ DuwaZau Gam ၏ အမြင်နှင့် ပြောဆိုချက်။
ငိုရှာလေပြီ ဧရာဝတီ- နီငြိမ်း (အညာတက္ကသိုလ်)
သည်တော့ ဘာကြောင့်သည်လိုဖြစ်ရသနည်း ဆိုသည်ကို ကျွန်တော်တွေးနေမိပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။
ဖြစ်နိုင်သည့်အချက်များအနက် အချို့မှာ နိုင်ငံ့အရေးမှန်သမျှ ဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်နေကြသော အစိုးရအရာရှိကြီးများ၏ ပညာရေးနောက်ခံ၊ အုပ်ချုပ်သည့်နေရာတွင် အများပြောတာကို လက်ခံစဉ်းစားသည်ထက် ငါ့ထက်ပိုတတ်တဲ့လူ မရှိ၊ ငါပြောတာသာ အမှန်ဖြစ်ရမည် ဟူသော ဗျူရိုကရက်ဉာဉ်၊ နိုင်ငံတကာအခြေအနေများနှင့်ယှဉ်ပြီး ကျယ်ဝန်းစွာ ရှုမြင်သုံးသပ်တတ်မှု၊ မိမိမှားနေသည်ကို မှားသည်ဟု ၀န်မခံလိုမှု၊ အမှားထဲမှ သင်ခန်းစာယူရမည့်အစား အမှားကိုပင် အမှန် ထင်ကာ ထပ်ကာထပ်ကာ မှားယွင်းနေမှု၊ မည်သူ့ကိုမှ အထင်မကြီးဘဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဟုတ်လှပြီဟု သွေးနထင်ရောက်နေ မှု စသည်တို့ ပါပါလိမ့်မည်။
ကျွန်တော်တို့ကဲ့သို့ သာမညောင်ည လူများတောင်မှ ဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ခုမှားလျှင် ဒုက္ခများစွာတွေ့ရတတ်ပေရာ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များအနေနှင့် ငါတကောကောမည်ထက် တတ်သိနားလည်သူများ၏ အကြံဉာဏ်များကိုယူ၊ သူတို့နှင့်တိုင်ပင် ကာ နှိုင်းနှိုင်းချိန်ချိန် လုပ်ရန်အရေးကြီးပေသည်။
နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်များ၏ စီမံခန့်ခွဲနိုင်မှုကို ဆန်းစစ်ရာတွင် အသုံးတည့်မည့် သူတို့၏ ပညာရေးနောက်ခံများကို တီးခေါက် ကြည့်ပါမည်။ ပထမဦးစွာ ကျွန်တော်နှင့်နီးကပ်ပတ်သက်နေသည့် စင်ကာပူ ခေါင်းဆောင်များ၏ ပညာရေးကို ကြည့်ပါမည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် စင်ကာပူခေါင်းဆောင်များကား စီမံခန့်ခွဲသည့်နေရာတွင် အတော်တော်သော ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်သည်ဟု ကျွန်တော်ယူဆသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
1. Lee Hsien Loong (၀န်ကြီးချုပ်)
Cambridge University - First Class Honours (1974) Harvard University - Masters (1980)
2. Goh Chok Tong (ယခင် ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း)
3. Lee Kuan Yew (ယခင် ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း)
ယခင် စင်ကာပူကက်ဘိနက် အဖွဲ့ဝင် ၀န်ကြီးများ
4. Minister for Law - Prof. S Jayakumar
5. Minister for Home Affairs - Wong Kan Seng
6. Minister for Foreign Affairs - BG George Yeo
7. Minister for Trade and Industry - Lim Hng Kiang
8. Minister for Defence - Teo Chee Hean
9. Minister for Education - Tharman Shanmugaratnam
လက်ရှိ ကက်ဘိနက်အဖွဲ့ -
Deputy Prime Minister and Co-ordinating Minister for National Security and Minister for Home Affairs
Deputy Prime Minister and Minister for Finance and Minister for Manpower
Loughborough University (UK) with First Class Honours degree (1976)
Master's Degree in Management at Stanford University
University of Singapore with an honours degree in civil engineering in 1980
PhD from Stanford University in 1989
National University of Singapore, becomingafaculty member (1991)
University of Newcastle in Australia (1977)
M.B.B.S - National University of Singapore
Fellowship training in surgical oncology in the USA at the M. D. Anderson Cancer Center in Houston
studied medicine at the National University of Singapore
study law at NUS , graduated withaFirst Class Honours degree in 1984
appointedaSenior Counsel of the Supreme Court of Singapore at the age of 38, one of the youngest
RADM (NS) Lui Tuck Yew, MP
Trinity College, Cambridge University in 1983
Fletcher School of Law and Diplomacy in 1994
Minister, Prime Minister's Office and Second Minister for Home Affairs and Second Minister for Trade and Industry
စင်ကာပူဝန်ကြီးများ၏ CV ကိုတော့ စင်ကာပူ ကက်ဘိနက် website ဖွင့်ကြည့်လျှင် အလွယ်တကူ သိနိုင်ပါသည်။
မလေးရှားခေါင်းဆောင်များလည်း အနောက်နိုင်ငံများမှ ဘွဲ့ရသူ အတော်များပါသည်။
PM: Abdullah bin Haji Ahmad Badawi
Deputy PM: Dato' Sri Najib Razak
Ministry of Works: Dato' Seri Samy Vellu
Royal Institute of British Architects, England
Ministry of International Trade & Industry; Rafidah binti Aziz
LL.B (Hons) - University of Wales, Aberystwyth, United Kingdom (1981-1984)
English Bar, Lincolns Inn, London. (1984-1985)
Malaysian Bar (1984-1985)
LL.M (London) - Commercial & Corporate Law, London School of Economics, London (1985-1988)
Min. of Agriculture & Agro-Based Industry: Mohamed Yassin
Bachelor of Economics & Malay Studies (Hons), Universiti Malaya
Min. of Domestic Trade & Consumer Affairs : Dato ' SHAFIE Apdal
Diploma in Management and in Shipping - London Business College
BA (Hons) Economic, Staffordshire University, England
Min. of Home Affairs : RADZI Sheikh Ahmad
Bachelor of Laws, Middle Temple, Luns of Court, London
Min. of Foreign Affairs : Syed HAMID bin Syed Jaafar Albar
Bachelor Barrister-At-Law, Middle Temple, United Kingdom
Minister Of Health : Dr.Chua Soi Lek
M.B.B.S (Universiti Malaya) (1963-1973)
Min. Of Culture, Arts and Heritage : Dr Rais Yatim
LL.B (Hons.) - University of Singapore
M.Phil degree - King's College, University of London
Ph.D Law - University of London
Minister of Science, Technology and Innovation : Dr. JamaludinbDato' Mohd Jarjis
Bachelor of Science (First class Honours) in Electrical Engineering - University of Manchester, Institute of Science and Technology (UMIST)
Masters of Science in Electrical Engineering - University of Manitoba, Canada
PhD in Electrical Engineering (Power System) - McGill University, Canada
Minister of Human Resources : DR. Fong Chan Onn
Bachelor (First class Honours) in Electrical Engineering - University of Canterbury, New Zealand
Masters in Business Administration - University of Rochester, New York
Doctorate in Operations Research/Industrial Economics - University of Rochester, New York
Minister In The Prime Minister's Department : Dr. Abdullah bin Md. Zin
Bachelor (Syariah) - Universiti Islam Madinah
Master (Syariah) - Universiti Al-Azhar, Mesir
Doktor Falsafah (Dakwah dan Tasawuf) - University Of Kent, England
Minister In The Prime Minister's Department : Dr. Maximus Johnity Ongkili
Bachelor of Agriculture Science - La Trobe University, Melbourne
Ph.D - La Trobe University, Melbourne
လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံခေါင်းဆောင်များ၏ ပညာရေးအရည်အချင်းကို မည်သည့်နေရာတွင် ကြည့်နိုင်ပါသနည်း။ ဘောင်းဘီချွတ်ကာ ပုဆိုးဝတ်လာသော ၀န်ကြီးများမှာမူ စစ်တက္ကသိုလ်ကျောင်ဆင်းများ ဖြစ်ဖို့များပါသည်။ အခြားအရပ်သား ၀န်ကြီးများကိုမူ မသိပါ။ လက်ရှိမြန်မာအစိုးရ ၀န်ကြီးများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်၏။
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် - ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မင်းအောင်လှိုင်
၂၆။ သူရဦးမြင့်မောင်- သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန
MBA ဘွဲ့ပင်မရသော်ငြားလည်း စီမံခန့်ခွဲရေးပညာကို မြန်မာနိုင်ငံအား အုပ်ချုပ်နေသူ အရာရှိကြီးများ နှံ့စပ်လိမ့်မည်ဟု ယူဆပါသည်။
နောက်တစ်ခုမှာ သည်မြစ်ဆုံစီမံကိန်း၏ နောက်ကွယ်တွင် မခန့်မှန်းနိုင်သော လာဘ်ပေးလာဘ်ယူကိစ္စများ အတော်များများ ပါဝင်နေလိမ့်မည် ထင်ပါသည်။ သွားလေသူ ခေါင်းဆောင်ကြီးများလည်း ပါပါလိမ့်မည်။ အပြင်လူများ သိရန်မလွယ်လှပါ။ နောက်ဖြစ်လာမည့် အကျိုးဆက်ကို မှန်းဆမကြည့်ဘဲ၊ သို့မဟုတ် မှန်းဆကြည့်ရန်လည်း မတတ်နိုင်ဘဲ တိုင်းပြည်အတွက် စေတနာဟု အသံကောင်းဟစ်ကာ လက်တစ်ဆုပ်စာ လူတန်းစား အကျိုးစီးပွားအတွက် ကြည့်လုပ်ခြင်း ဖြစ်သည်ဆိုပါလျှင် အလွန်ဆိုးလှသော စေတနာပင်ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
အရာရာကို စင်ကာပူနှင့် နှိုင်းယှဉ်တွက်ဆနေသည်ဟု မယူဆစေလိုပါ။ သို့သော် စင်ကာပူမှ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူကိစ္စကို ထိန်းချုပ်ထားမှုအား အနည်းငယ် သာဓကပြပါမည်။
၂၀၀၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၁၂ ရက်နေ့ထုတ် Straits Times သတင်းစာတွင် Senior Immigration Officer တစ်ဦးအား လာဘ်စားမှုဖြင့် တရားစွဲကြောင်း သတင်းပါလာသည်။ အသက် ၆၀ ရှိပြီဖြစ်သော Mr Chung မှာ ICA တွင် အလုပ်လုပ်လာတာ အနှစ် ၄၀ ရှိပြီ။ ၁၉၇၀ ခုနှစ်ကတည်းက ICA တွင် ပြာတာဘ၀ဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။ ယခု အသက် ၃၆ နှစ်ရှိ တရုတ်မတစ်ဦးနှင့် အဆက်အသွယ်လုပ်ခဲ့သည့် hand phone မှ sms များကိုဖျက်ပေးရန် sex ဖြင့် အလဲအလှယ်လုပ်ခဲ့သည်။ သူ့အမေကိုလည်း အတူနေခွင့် ပေးခဲ့သေးသည်။ ထို့အတွက် ဂေလမ်းရှိ Bright Star ဟိုတယ်တွင် စုစုပေါင်း ၅ ကြိမ် နသားပါးယား လုပ်ခဲ့သည်။ ထို ၅ ကြိမ်အတွက် ထောင် ၆ လ နှင့် အလုပ်ပြုတ်၊ သူ့အမေကို အတူနေခွင့်ပြုခဲ့သည့်အတွက် နောက်ထပ် ၂ လ ထပ်မံထောင်ကျခဲ့သည်။
အခြား Senior ICA Officer တစ်ဦးဖြစ်သည့် အသက် ၅၆ နှစ်ရှိ Mr Dong အားလည်း social visit pass များ သက်တမ်းတိုး ပေးရန် နိုင်ငံခြားသားများထံမှ စင်းဒေါ်လာ တစ်သိန်းလေးသောင်း လာဘ်စားမှုအတွက် ဒါဏ်ငွေ တစ်သောင်းနှင့် ထောင် ၁၈ လ ကျခံစေရန် ရုံးတော်မှ ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ထို့ပြင် ၎င်း၌ အခြား စင်းဒေါ်လာ ၇ သောင်း လာဘ်စားထားသော အမှု ၈ မှုလည်း ရှိသေးပြီး ထိုအမှုများအတွက် သီးသန့်ကျခံစေရမည် ဖြစ်သည်။
ထိုသတင်းအရ တစ်နှစ်လျှင် public officer ၂၀ ခန့် လာဘ်စားမှုဖြင့် အရေးယူခံရသည် ဆိုသည်။
၂၀၁၀ စက်တင်ဘာ ၈ ရက်နေ့ သတင်းတွင်မူ NEA (National Environment Agency) မှ Technical Officer တစ်ဦးဖြစ်သူ အသက် ၄၆ နှစ်ရှိ Mr Oh အား စုစုပေါင်း ၁၅ မှုတွင် စင်းဒေါ်လာ ၁၂၈၉၈၀ လာဘ်စားမှုဖြင့် တရားစွဲသည့် သတင်းကို ဖတ်ရသည်။ လာဘ်စားမှုအတွက် အများဆုံး ဒါဏ်ကြေးမှာ စင်းဒေါ်လာ တစ်သိန်းနှင့် ထောင်ဒါဏ် ၅ နှစ်ဖြစ်၏။
စင်ကာပူတွင် လာဘ်စားမှုအတွက် ပြဌာန်းထားသော ဥပဒေမှာ PCA (Prevention of Corruption Act) ဖြစ်၏။ လာဘ်ပေး လာဘ်ယူမှုကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် CPIB – Corruption Practices Investigation Bureau ကို ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။
သို့သော် ဥပဒေသည် ဥပဒေမျှသာဖြစ်ပြီး ဥပဒေကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သော သစ္စာရှိဥပဒေဘက်တော်သားများက ပိုအရေးကြီးပါသည်။ လာဘ်စားမှုကို တိုက်ဖျက်မည့် အရာရှိများက လာဘ်ယူနေလျှင် မည်ကဲ့သို့ ထိန်းပါမည်နည်း။ ထို့ထက် ထို လာဘ်ယူနေသော လာဘ်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးအရာရှိများကို အရေးယူရမည့် တရားသူကြီးက လာဘ်စားနေပါလျှင် ပိုဆိုးတော့မည်။
ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှ လာဘ်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဟု ကြွေးကြော်နေသည့် လာဘ်စားနေသော အရာရှိကြီးများကို မည်သူ အရေးယူပေးပါအံ့နည်း။
ဥပဒေကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမည့်သူများက ဥပဒေအထက်တွင် ရှိနေသရွေ့ကာလပတ်လုံး မြစ်ဆုံဆည်များ စီမံကိန်း၊ ရွှေသဘာဝဓါတ်ငွေ့စီမံကိန်း၊ ဧရာဝတီမြစ်ကြောင်းကို တရုတ်တို့လက်သို့ လွှဲပေးရေးစီမံကိန်း၊ ကချင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှ သစ်များကို တရုတ်များ ခုတ်ချင်တိုင်းခုတ်၊ ထုတ်ချင်တိုင်းထုတ်နေသည်ကို မျက်စိမှိတ်ထားရေး စီမံကိန်း၊ ရွှေတူးဖော်ရေး စီမံကိန်း စသည့် တိုင်းပြည်ငါးပါးမှောက်စေမည့် ဘယ်သူသေသေ၊ ငတေမာပြီးရောစီမံကိန်းများ ဆက်လက်ရှိနေဦးမည်မှာ မလွဲပါကြောင်း -
၁၈-၉-၂၀၁၁ ည ၁၁း၂၀ မိနစ်
ဆရာခင်ဗျာ။ ဒီဆိုက်ကို ဒီနေ့မှတွေ့တာပါ။ ပိုစ့် ၂ခုလောက်ဖတ်ရုံနဲ့ မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအတွက် ဘယ်လောက်အကျိုးများမလည်း သိသာလှပါတယ်။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဒီလိုတန်ိဖိုးရှိတဲ့ပိုစ့်တွေကို လူအများကြားမှာပြန့်ပွားစေချင်စိတ် အလွန်ပဲဖြစ်မိပါတယ်။ အခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာ လူအများဟာ ဘလော့ဖတ်တာထက်စာရင် ဖေ့စ်ဘွတ်သုံးတာပိုများလို့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ နုတ်စ်အနေနဲ့ရေးရင် ဖေ့စ်ဘွတ်သုံးစွဲသူမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအကြားမှာ ဘလော့ထက်ကျယ်ပြန့်လာနိုင်စရာ အကြောင်းရှိပါတယ်။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာလူငယ်လူရွယ်တွေ ဟာသပိုစ့်တွေ၊ သရဲပိုစ့်တွေ၊ အချစ်ရေးပိုစ့်တွေ၊ အီမိုပိုစ့်တွေ ဖတ်ကြရှယ်ကြတာ ကီးဘုတ်ပေါ်မှာပဲလက်သီးလက်မောင်းတန်းပြီး နိုင်ငံရေးဆော်ကြနှက်နေကြတာပဲတွေ့နေရပါတယ်။ အဲ့တာတွေလည်း ရှိပါစေ ဒီလိုစာတွေလည်းရှိလာရင် ပိုကောင်းမှာသေချာပါတယ်။
ဆရာခင်ဗျာ။ ဒီဆိုက်ကို ဒီနေ့မှတွေ့တာပါ။ ပိုစ့် ၂ခုလောက်ဖတ်ရုံနဲ့ မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအတွက် ဘယ်လောက်အကျိုးများမလည်း သိသာလှပါတယ်။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဒီလိုတန်ိဖိုးရှိတဲ့ပိုစ့်တွေကို လူအများကြားမှာပြန့်ပွားစေချင်စိတ် အလွန်ပဲဖြစ်မိပါတယ်။ အခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာ လူအများဟာ ဘလော့ဖတ်တာထက်စာရင် ဖေ့စ်ဘွတ်သုံးတာပိုများလို့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ နုတ်စ်အနေနဲ့ရေးရင် ဖေ့စ်ဘွတ်သုံးစွဲသူမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအကြားမှာ ဘလော့ထက်ကျယ်ပြန့်လာနိုင်စရာ အကြောင်းရှိပါတယ်။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာလူငယ်လူရွယ်တွေ ဟာသပိုစ့်တွေ၊ သရဲပိုစ့်တွေ၊ အချစ်ရေးပိုစ့်တွေ၊ အီမိုပိုစ့်တွေ ဖတ်ကြရှယ်ကြတာ ကီးဘုတ်ပေါ်မှာပဲလက်သီးလက်မောင်းတန်းပြီး နိုင်ငံရေးဆော်ကြနှက်နေကြတာနဲ့စာရင် ဒီလိုစာမျိုးတွေ့ပြန့်တာ ပိုကောင်းမှာသေချာပါတယ်။